होटलभित्रको त्यो गोप्य चर्तिकला ~ Smritirogi's Blog | स्मृतिरोगीको ब्लग
होटलभित्रको त्यो गोप्य चर्तिकला
Ram Gurung April 20, 2019
त्यतिबेला मैले थुप्रै पटक वुटवल–पोखरा ओहोर–दोहोर गर्नुपरेको थियो । कार्यगत अनुकूलताका लागि र सवारी उपलब्धताका आधारमा कहिले स्याङ्जा, पाल्पा हुदै वुटवलको बाटो प्रयोग गर्थें त कहिले पोखरा, नारायणघाट हुदै वुटवल जाने बाटो प्रयोग नगरेको होइन । त्यतिबेला आवत–जावतका क्रममा बनेका यी दुई (वुटवल र पोखरा) गन्तब्यका बीचमा पर्ने अन्य स्थानहरु जस्तै नारायणगढको बाटो हुदै जाँदा भरतपुर, चितवन र स्याङ्जाको बाटो हुदै जाँदा वालिङ, गल्याङ र पाल्पामा पनि विविध कारणवश बास बस्नु परेको थियो । यतिबेला मैले त्यही बसाईंका क्रममा संयोगवश देखेको अप्रत्याशित दृष्यको प्रसंग जोड्न खोजेको हुँ ।
साँझको समय थियो, सूर्यले पश्चिम आकाशबाट विदा मागिसकेको भए पनि उज्यालोको प्रभाव पूर्णतः निस्तेज भएर अँध्यारोले आक्रमण गरिहाल्न सकेको थिएन । होटलको नाम र स्थान उल्लेख गर्न चाहन्न ।
होटलको एउटा कोठामा म पट्यार लाग्दो गरी एक्लै मोबाइल खेलाउदै ओछ्यानमा पल्टिरहेको थिएँ । पल्लो कोठाबाट धेरै समय अगाडिदेखि नै अस्पष्ट गुन–गुन आवाज आइरहे पनि त्यतातिर मेरो त्यति ध्यान जान सकिरहेको थिएन । विस्तारै हल्लाले केही चर्को रुप लिन थालेपछि मनमा ‘खास के रहेछ’ भन्ने कौतुहलता जाग्न थाल्यो र पिसाव फेर्ने वहानामा बाहिर निस्किएँ । आधा खुल्ला रहेको ढोकाबाट कर्के नजरले भित्रैसम्म चिहाउने चेष्टा गरें । नसाको मातमा लठ्ठ परेका उनीहरुले मलाई देखे वा देखेनन्, त्यो त थाह भएन । तर जनसुरक्षाको जिम्मेवार संस्थामा कार्यरत रहेका जस्ता देखिने तीन अपरिचित अनुहारका बीचमा दुई परिचित अनुहार मैले प्रष्टैसँग चिन्न सकें । त्यसपछि त झन जिज्ञासाको तीव्रावेगले यी कानहरु ठाडा–ठाडा भए । वरिपरि कुर्सीहरु राखिएको कोठाको बीच भागमा ठूलो टेबुल थियो, टेबुलमाथि महंगा–महंगाजस्ता लाग्ने रक्सीका बोत्तलहरु थिए । गिलासमा हालिएका रक्सीहरु झण्डै आधा–आधा भैसकेका थिए । टेबुलको वरिपरि रहेका कुर्सीहरुमा ती पाँचजना घुमाउरो भएर बसेका थिए । टेबुलको गिलास उठाएर एक घुट्को घुटुक्क पारिसकेपछि एकजनाले भन्यो, “.........फलना मुद्धा मिलाउदा तिनीहरुबाट ....रुपैया लिएकोमा मेरो भागमा किन ......... रुपैयाँ मात्रै ?”
“....त्यो मुद्धाको कुरा गर्ने हो भने मैले त्यसमा त अहिलेसम्म भाग नै पाएको छैन ।” अर्कोले तत्काल थपिहाल्यो ।
उच्च ओहदाको जस्तो देखिने अर्को ब्यक्तिले सुस्त बोल्न सचेत गराउदा–गराउदै पनि एउटा परिचित अनुहार बोल्न थाल्यो, “मुद्धा खोजी–खोजी ल्याउने हामी । छिमेकीहरुलाई समेत आँखामा छारो हालेर पैसा फुत्काउने हामी । भागवण्डाका कुरामा तिमीहरु किन बाठो ?”
यति सुनिसकेपछि अरु कुरा सुनेर बाहिर बसिरहनु मेरो लागि उपयुक्त पनि थिएन र आवश्यक पनि लागेन । सायद त्यो होटल उनीहरुको अखडाजस्तै रहेछ र त्यो कोठा उनीहरुको लागि भागवण्डा र वार्ताको गोप्य कक्ष । मैले प्रष्टैसँग चाल पाइसकेको थिएँ । ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ को मन्त्र जपेर खोक्रो आवरणभित्र लुकेका ती कलंकित ब्यक्तिहरुबाट हाम्रै परिवेश वरिपरि नै अख्तियार दुरुपयोग र अवैध आर्थिक चल–खेल हुदारहेछन् । म सोच्दथें, ती परिचित अनुहारहरु विना जागिर, विना कामधन्दा, विना मिहिनेत, विना उद्यमशील बरालिएर सम्भ्रान्त शैलीको जीवन कसरी जिइरहेका छन् ? त्यतिबेला बल्ल थाह पाएँ, उनीहरु त बजारिया मुद्धाका ‘बजार प्रतिनिधि’ हरु पो रहेछन्, कमिशनखोरहरु रहेछन् । र जनसुरक्षाका पहरेदार भनाउदाहरु न्यायको क्रय–विक्रयको कारोवार गर्ने सञ्चालकहरु ।
कोठाभित्र आइसकेपछि म धेरैबेर सम्म घोत्लिन बाध्य भएँ, नयाँ नेपालको परिवर्तनप्रति । नयाँ नेपाल भनिने मुलुकमा त त्यस्तो खासै केही परिवर्तन नभएको जस्तो भान भयो । २०६२÷२०६३ सालको जनआन्दोलन–२ मा देशैभरिबाट सामन्ती राजतन्त्रको विरुद्धमा स्वतस्फूर्त रुपमा सडकमा उर्लिएको जनसागरले तत्कालीन शाही सुरक्षाकर्मीको बन्दुकको नालबाट निस्कने गोलीको समेत परवाह नगरी ल्याएको कठपुतली गणतन्त्रप्रत्रि मनमनै धिक्कारें । जनताको अवस्था, हक, अधिकार र सुरक्षा ब्यवस्थाका बारेमा अनेकन तर्क वितर्कहरु मनभित्र जन्मिए । आक्रोशले बंगाराहरु कस्सिएर दह्रा–दह्रा भए । फेरि एउटा अर्को क्रान्तिको आवश्यकता रहेको महशुश पनि गरें । यस्तै यस्तै के के सोच्दा सोच्दै समय गएको थाहै पाइन । बाहिरबाट “खाना खानुहुन्न दाई ?” भन्दै ढोका ढक ढक गरिरहेको होटलका भाईको आवाजसँगै सबै सेलाएर गए । मोबाइलमा यसो हेरें, आठ बजिसकेको थियो । कतिखेर उनीहरु गइसकेका रहेछन् पत्तै भएन । लोडसेडिङको समय थियो, बत्ती थिएन । म त अध्यारैमा पो बसिरहेको रहेछु ।
योगी स्मृतिरोगी रामबहादुर गुरुङ ‘सर्वत्रापमानित’
क्याबिन रेस्टुरेन्टमा एकदिन
सुर्यदेवले विदा लिएपछि दिनलाई रात्रीकालिन कालो सन्नाटाले आक्रमण गरी आफ्नो वशमा लिदै समय सन्ध्याकालीन अबस्थामा प्रवेश गर्दैथियो. दिनको धुलो...
राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई लात हानेर यूएईमा मौलाएको हुण्डीको अवैध कारोवार
११ जुन २०१३ मा विभिन्न ५ नेपालीहरुको नामबाट वेष्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर मार्फत ' Andres De Jesus De Leon Coxas' को नाममा झण्डै...
त्यतिबेला मैले थुप्रै पटक वुटवल–पोखरा ओहोर–दोहोर गर्नुपरेको थियो । कार्यगत अनुकूलताका लागि र सवारी उपलब्धताका आधारमा कहिले स्याङ्जा, पाल्प...
के राष्ट्रप्रति जिम्मेवार पत्रकार महासंघसँग जवाफदेहिता छ ?
“सर आज हुन्डीमा रेट कति छ ?” अभिवादनको औपचारिकता सकिनासाथ उसले सोध्यो, म छक्क परें । “त्यस्तै सत्ताइस दश/सत्ताइस पन्ध्र दिन मिल्छ, सत्ताइ...
Copyright © Smritirogi's Blog | स्मृतिरोगीको ब्लग | Design by Smritirogi